Oberammergau, एक परी कथा शहर | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | अल्बानिया, के हेर्ने
युरोपमा धेरै शहरहरू छन् जुन परिकथाहरूबाट लिइएको जस्तो देखिन्छ जुन हामी बच्चाको रूपमा पढ्छौं। अल्बानिया यससँग धेरै छन् र ती मध्ये एउटा एउटा रमणीय सानो शहर हो Oberammergau।
यो साइटले यसको मध्य कालखंड र वास्तुकलामा कथाको सबै कल्पनालाई केन्द्रित गर्दछ, तर यो पनि उत्कट ईसाईहरूका लागि हरेक वर्ष एक महत्त्वपूर्ण चाड वरपर हुन्छ। ख्रीष्टको जुनून। Oberammergau, सँगै भेला गरौं।
यो भित्र छ बावरिया, जर्मनी। बावरिया जर्मनीको स्वतन्त्र राज्य हो, क संघीय राज्य त्यो गणतन्त्र बनाउँछ र देश को दक्षिण पूर्व मा स्थित छ। तिनीहरू लगभग यो बसोबास 13 मिलियन मानिस र यसको राजधानी सुन्दर छ म्यूनिख.
लामो समयको लागि, बवेरिया एक फ्रान्किश डची थिए, उदाहरणका लागि, पूर्वी जनता, स्लाभ वा मिसर्सको प्रगति रोक्ने दृढ लक्ष्यका साथ। त्यतिखेर यी देशहरूमा इसाई धर्मको विकास भएको छ, हामी छैठौं, छैठौं र आठौं शताब्दीको कुरा गर्छौं। पछि वर्तमान बावरिया यसका अंश बन्नेछ क्यारोलिian्गियन साम्राज्य पहिले र त्यसपछि पवित्र रोमन जर्मन साम्राज्य.
पछिल्लो साम्राज्य आफै नेपोलियनले खारेज गरेपछि बभेरिया एक भयो रेनो यद्यपि उनी लामो समयदेखि अस्ट्रियाको प्रभावमा थिए। यो अन्ततः १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा जर्मन साम्राज्यमा सामेल भयो, जबकि सापेक्ष स्वायत्तता कायम राख्दै।
वर्ष पछि यो Weimar गणतन्त्र को हिस्सा हुनेछ र हुनेछ नाजिज्मको पालना किनकि यहाँ हिटलरले १ 1923 २ in मा आफूले गरेको प्रयासमा तारा चलाए। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि यो अमेरिकी सेनाको हातमा छोडियो र यसको हिस्सा थियो जर्मन संघीय गणराज्य देशको पुन: एकीकरण सम्म।
त्यसबेला बावरिया भित्र, गर्मिश्च-पार्टेनकिर्चेन जिल्लामा ओब्रामरगाउ नगरपालिका हो। नाम एक मोड़ हो, जर्मनमा एक भाषिक मोड़ जुन प्राय जसो संगीतमय संरचना भनिन्छ ronda जहाँ कम्तिमा तीन आवाजले एकै स्वरमा एउटै धुन गाउँछन्, तर प्रत्येक एक फरक समयमा सुरु हुन्छ, दुर्लभ तर धेरै सामन्य।
गाउँका लागि परिचित छ ख्रीष्टको जुनून जुन प्रत्येक दस बर्षमा एक पटक मात्र आयोजित गरिन्छ। यो सबै १ 1633 मा सुरू भयो सबै गाउँले एक प्रतिज्ञा गरे अनौंठो त्यस बेलामा युरोप कलले प्रभावित भयो बुबोनिक प्लेग, एक बैक्टीरियोलोजिकल रोग जो बगल र कोचमा लिम्फ नोड्स फुकाउँछ। कहिलेकाँही, सूजनको कारण र चिकित्सा उपचारविना, जुन स्पष्ट रूपमा शताब्दीहरू पहिले अवस्थित थिएन, लिम्फ नोडहरू खोल्ने र ओज हुने थियो।
महामारी चूहों र चूहोंबाट आएका भाँडाबाट फैलिएको थियो, त्यस्ता पशुहरू त्यो समयमा मानिसहरूसँग मिलेर आएका थिए। यो अत्यन्त घातक थियो र अनुमानित यूरोप, अफ्रिका र एशियाभरि करीव million करोड मानिस मरे, उदाहरणका लागि २%% र %०% युरोपियन जनसंख्याको बीचमा।
त्यसोभए, युरोपले यस महामारीको सामना गरिरहेको छ किनकि बभेरियन शहरवासीहरू, एकदम धेरै भक्तजनहरूले वचन दिएका थिए यदि तिनीहरू रोगबाट मुक्त भए भने तिनीहरूले येशूको जीवनलाई सँधैको लागि मनोरञ्जनको प्रबन्ध गर्ने थिए.
संभावना वा भक्ति प्लेग Oberammergau मा पुगेको थिएन र त्यही वर्ष मृत्यु कम हुन थाले। गाउँका मानिसहरूले सोचे कि उनीहरूको प्रार्थना र प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरमा पुगेको छ ख्रीष्टको पहिलो जोश १ 1634 XNUMX मा शुरू भयो। खैर, यो आज सम्म आफैलाई दोहोर्याइन्छ प्रत्येक वर्ष जुन शून्यको साथ समाप्त हुन्छ, कि, एक दशक मा एक पटक।
गाउँका सबै मानिसहरू भाग लिन्छन्आज, यहाँ करिब दुई हजार मानिसहरु जो यहाँ बस्छन् र अरु जो ठाउँमा कम्तिमा २० बर्ष सम्म बाँचिरहेका छन्। तिनीहरू नासरतका येशूको कथा पाँच महीनाको लागि अवधिमा उनको मृत्यु नभएसम्म संगठित र पुन: निर्माण गर्छन्। हामी २०१ 20 मा त्यसो हौंअर्को जोश २०२० मा हुनेछ र यो number२ हुनेछ।
उनीहरूको अनुमान छ कि त्यहाँ कम्तिमा 500०० हजार आगन्तुकहरु र खुल्ला हावामा राउन्ड आकारको थिएटरमा उपस्थित हुने छन् जहाँ केही समयका लागि पार्टी आयोजित छ। संगठन अर्को वर्ष, नोभेम्बर मा सुरु हुन्छ र पहिलो प्रदर्शन पहिले नै एक मिति छ: मे २२, १ 16 2020।
कहानी एक महान मेलोड्रामा हो, यो धेरै लामो छ र प्रत्येक प्रदर्शन यसरी दुई र दुई आधा घण्टा को दुई क्षण लामो, बीचमा तीन घण्टा अन्तराल संग। यो केवल जर्मनमा छ तर ब्रोसरहरू अन्य भाषाहरूमा प्रदान गरिन्छ। महान परिष्कृत यो अक्टुबर। मा हुनेछ। यो अन्ततः भन्न लायक छ, २०१ since पछि Oberammergau का जुन जुन एक हो युनेस्कोका लागि अमूर्त सम्पदा.
स्पष्ट रूपमा, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं यस धार्मिक बिदा एक पैदल लिन को लागी प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। यदि तपाईं जर्मनीको भ्रमणमा जानुहुन्छ र तपाईंलाई बवेरियाको परिदृश्य र संस्कृति मनपर्‍यो भने, तपाईंले यसलाई जान्न सक्नुहुनेछ र यसका अन्य आकर्षणहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र, एक भ्रमण भुक्तान गर्नुहोस् जुनूनको थिएटर जुन प्रत्येक बर्ष खुला रहन्छ, मंगलबार देखि आइतबार बिहान १० देखि साँझ 10 सम्म। प्रवेश भुक्तानी भयो र त्यहाँ छ निर्देशित भ्रमणहरू जसमा स्टेज र यसको पछाडि क्षेत्रहरू समावेश गर्दछ सोही दिन बिहान ११ बजे।
तर मैले माथि भनें, ओबरमर्गाउमा ख्रीष्टको जोस सबै कुरा होइन। गाउँ सुन्दर छ आफै र धेरै छ पुराना भवनहरू सुन्दर ढंगले सजाइएको। तपाईं फोटो लिन थकित हुनेछ! यो र a्गीन र रमणीयको उदाहरण हो बप्तिस्मा कला Lüftlmarelei। यो रेखाचित्रको शैली हो जुन बभेरियामा धेरै शहरहरू र गाउँहरूको फेकडेक्स सज्जित गर्दछ, शैलीसहित भित्ताचित्रहरू इटालियन बारोक.
Oberammergau यस सजावटी शैली को एक उदाहरण हो, लगभग यसको मक्का। भनिन्छ, यो अलंकृत शैलीको सिर्जनाकर्ता १ XNUMX औं शताब्दीमा फ्रान्ज सर्पा ज्विन्क थिए। यो मानिस चित्रकार थियो र भनिन्छ कि उसको घर भनियो Zum Lüftl मानिसहरूले उहाँलाई चित्रकार लेफ्ल्ट भने। अर्को सिद्धान्त भन्छ कि Zwinck वास्तवमा आफ्नो घर बाहिर काम गर्न रुचायो किनभने रंग छिटो सुक्खा र हवाई, जर्मनमा यसको अर्थ हावा हो।
जे भए पनि, यहाँ ओबरमर्गाउमा तपाईले धेरै घरहरू देख्नुहुनेछ पेस्टल रंगहरूमा। व्यावहारिक रूपमा लगभग सबै भवनहरू यस शहरमा सजावट गरिएको छ र यही कारणले पूरा सेट एक परिकथाबाट चित्रणको सम्झना दिलाउँछ। हराउन नहुने भवनहरूमध्ये फोर्स्ट्याम्ट, स्थानीय चर्च, मुब्ल्डोमाहोस, कोल्ब्लाहस र पाइलेटस हाउस वा पिलातुसस छन्। राम्रो यात्रा!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » अल्बानिया » Oberammergau, एक परी कथा शहर